पानी पिउँदा मृत्युदण्डको सजाय पाउने आसिया बीबीकाे पक्षमा फैसला, पाकिस्तानमा बल्याे अागाे ? – Everest Dainik – News from Nepal
पानी पिउँदा मृत्युदण्डको सजाय पाउने आसिया बीबीकाे पक्षमा फैसला, पाकिस्तानमा बल्याे अागाे ?
इस्लामाबाद, कार्तिक १४ ।
ईश्वरको निन्दा गरेको आरोपमा पाकिस्तानको तल्लो अदालतद्वारा मृत्युदण्डको सजाय दिइएकी इसाई महिला आसिया बीबीलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएकाे छ ।
त्यहाँको जिल्ला अदालत र त्यसपछि उच्च अदालतले उनलाई पैगम्बर मुहम्मदको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गरेको भन्दै मृत्युदण्ड दिएको थियो । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले भने उक्त फैसलालाई रद्द गर्दै उनलाई सफाइ दिएकाे हाे । साथै अदालतले उनलाई तुरुन्त थुनामुक्त गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मियाँ साकिब निसारले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको पहिलेको फैसलालाई यस फैसलाद्वारा रद्द गरिएको र यदि आसियाविरुद्ध अन्य कुनै आरोप नभए उनलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनको फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आसिफ सईद खोसाले लेखेको र उक्त फैसलाको सुरुमा पैगम्बर मोहम्मद या कुरानको अपमानको सजाय आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड नै भएपनि कतिपयलाई फसाउन यस कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका छन् । उता आसिया बीबीको मृत्युदण्डको फैसलालाई रद्द गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पाकिस्तानभरि उग्र प्रदर्शन भैरहेका छन् ।
अदालतले यो फैसला यसअघि प्रतिपादित नजिर (मशाल खान र अयूब मसीहको केस) लाई टेकेर गरेको हो । पाकिस्तानमा पैगम्बर मुहम्मद वा धर्मको अपमान गरेको मद्दामा धेरैलाई यसरी नै फसाउने गरेको इतिहास छ । गएको २८ वर्षमा ६२ जनालाई अदालतको फैसला आउन अगावै मारिएको छ ।
यो फैसलालाई लिएर पाकिस्तानमा बिरोध सुरु भएको छ । पाकिस्तानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा निसेधआज्ञा जारी गरेको छ । उता मस्जिद तथा धार्मिक संगठनहरुले फैसलाको घोर निन्दा गर्दै विरोधमा उत्रन उत्रन आम जनतालाई आव्हान गरेको छन् ।
काे हुन् आसिया बीबी र भएकाे के थियाे ?
आसिया बीबीमाथि एउटा मुस्लिम महिलासँग कुराकानीका क्रममा पैगम्बर मोहम्मदको बारेमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको आरोप लागेको छ । आसियाले भने आफूले पैगम्बर मोहम्मदको अपमान नगरेको भन्दै आएकी छिन् ।
पाकिस्तानमा पैगम्बर मोहम्मद या कुरानको अपमान गर्नुलाई ‘ईश्वर निन्दा’को अपराधको श्रेणीमा राखिन्छ र यसलाई निकै संवेदनशील विषय मानिन्छ । आलोचकहरूले भने यस कानूनको दुरुपयोग गर्दै अल्पसंख्यकहरूलाई फसाइने गरेको बताएका छन् ।
१४ जुन २००९ को दिन आसिया नुरिन आफ्नो घर नगिचैको बगैँचामा अन्य महिलाहरूसँग काम गर्दै थिइन् । त्यहाँ उनको केही अन्य महिलाहरूसँग झगडा भएको थियो र त्यसै झगडालाई ‘ईश्वर-निन्दा’ मुद्दा बनाएर उनलाई फाँसीसम्मको सजाय सुनाइएको थियो । आसियाले आफ्नो पुस्तकमा यस घटनाको क्रमिक वर्णन गरेकी छिन् ।
अंग्रेजी वेबसाइट न्यूयॉर्क पोस्टमा छापिएको उनको पुस्तकको केही अंशमा असियाले लेखेकी छिन्, “म आसिया बीबी हुँ, जसलाई तिर्खा लाग्दा पानी पिएको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।” उनले लेखेकी छिन्, “म जेलमा छु किनभने मैले त्यो इनारबाट पानी पिएकी थिएँ जसबाट मुस्लिम महिलाहरू पिउने गर्दथे । मसँगै काम गर्ने मुसलमान महिलाहरूका निम्ति एउटी इसाई महिलाले छोएको पानी पिउनु स्वीकार्य थिएन ।” “मलाई १४ जुन २००९ को हरेक घटना राम्ररी याद छ ।”
त्यसदिन बाली थुपार्न खेतमा गएकी थिएँ, मा खेत छेवैको इनारनेर गएँ र मैले त्यहाँ रहेको बाल्टिनको सहायताले पानी झिकें । त्यहीं एउटा गिलास पनि थियो, मैले गिलासमा बाल्टिनबाट पानी झिकेर पानी पिउन थाले । त्यत्तिकैमा एउटी महिलाले मसँग पानी मागिन् र मैले त्यही गिलासमा उनलाई पनि पानी दिएँ ।” आसिया अगाडि भन्छिन्- त्यसैबेला एउटी महिलाले उनलाई भनिन्, ‘त्यो पानी नपिऊ, यी इसाई महिलाले छोएर त्यो अशुद्ध भैसक्यो ।’
आसिया लेख्छिन्, “मैले यसको प्रत्युत्तरमा भनें, ‘मलाई लाग्छ येसु मसीहले यस कामलाई पैगम्बर मोहम्मदले भन्दा भिन्नै तरिकाले हेर्नेछन् ।’ उनले मसँग क्रुद्ध हुँदै भनिन्,’पैगम्बर मोहम्मदको विरुद्ध बोल्ने तिम्रो हिम्मत कसरी भयो ?’ उनले मलाई मबाट पाप भएको र त्यसबाट मुक्तिका लागि मैले इस्लाम स्वीकार गर्नुपर्ने समेत बताइन् ।” “मलाई यो कुरा नराम्रो लग्यो र मैले आफूलाई आफ्नो धर्ममा पूर्ण विश्वास भएको र धर्म परिवर्तन नगर्ने बताएँ ।” आसिया भन्छिन् ।
ट्याग्स: Asia BIBI, pakistan